Tsamba kuvaKorose 4:1-18
Zano kuna vanatenzi (1)
“Rambai muchinyengetera” (2-4)
Kufamba nekuchenjera kune vari kunze (5, 6)
Kwaziso yekupedzisira (7-18)
4 Imi vanatenzi, batai varanda venyu zvakanaka uye zvakarurama, muchiziva kuti nemiwo muna Tenzi ari kudenga.+ 2 Rambai muchinyengetera,+ uye pamunenge muchidaro, rambai makamuka uye ongai.+ 3 Nesuwo muchitinyengetererawo,+ kuti Mwari ativhurire suo rekuparidza shoko kuti tizivise nezvechakavanzika chitsvene* pamusoro paKristu, chinova ndicho chandakasungirwa mujeri,+ 4 uye kuti ndichizivise zvakajeka sezvandinofanira kuita. 5 Rambai muchifamba nekuchenjera pamunenge muine vaya vari kunze, muchishandisa nguva yenyu nekuchenjera.*+ 6 Nguva dzese mashoko enyu ngaaratidze mutsa, akarungwa nemunyu,+ kuti muzive mapinduriro amunofanira kuita munhu mumwe nemumwe.+ 7 Tikiko,+ hama yangu inodiwa nemushumiri akatendeka uye muranda waShe seniwo, achakuudzai zvese nezvangu. 8 Ndiri kumutuma kwamuri kuti muzive kuti takadii uye kuti anyaradze mwoyo yenyu. 9 Ari kuuya naOnisimo,+ hama yangu yakatendeka uye inodiwa, inobva kwenyu ikoko; vachakuudzai zvese zviri kuitika kuno. 10 Aristako,+ musungwawo seni, anokukwazisai, vese naMako+ hama yaBhanabhasi, uyo wamakaudzwa kuti kana azouya kwamuri mumugamuchire,+ 11 naJesu, uyo anonzi Justo. Ava vamwe vevaya vakachecheudzwa. Ndivo chete vari kushanda neni pakutsigira Umambo hwaMwari, uye vari kundinyaradza* zvikuru. 12 Epafrasi,+ muranda waKristu Jesu, uyo akabva kwenyu ikoko, anokukwazisai. Anogara achikunyengetererai nemwoyo wese, kuti mupedzisire manyatsokwana, muchitenda zvakasimba zvese zvine chekuita nekuda kwaMwari. 13 Nekuti ndinomupupurira kuti anoshanda nesimba chaizvo achiitira imi nevaya vari kuRaodhikiya nekuHiraporisi. 14 Ruka,+ chiremba anodiwa, anokukwazisai, vese naDhemasi.+ 15 Ndikwazisireiwo hama dziri kuRaodhikiya naNimufa neungano inosanganira pamba pake.+ 16 Kana tsamba iyi yaverengwa pakati penyu, rongai kuti iverengwewo+ muungano yevaRaodhikiya, imi moverengawo inobva kuRaodhikiya. 17 Uyewo, udzai Akipasi+ kuti: “Isa pfungwa dzako paushumiri hwawakagamuchira munaShe, wonyatsohuita.” 18 Iyi ndiyo kwaziso yangu ini Pauro, yandanyora neruoko rwangu.+ Rambai muchifunga nezveusungwa hwangu.+ Nyasha dzaMwari ngadzive nemi.
^ ChiGir., “muchitenga nguva yakakodzera.”
^ Kana kuti “kundisimbisa.”